यौनसम्पर्क गर्न नपाउँदा श्रीमतीको हत्या गरी आफ्नै लिंग काटे | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यौनसम्पर्क गर्न नपाउँदा श्रीमतीको हत्या गरी आफ्नै लिंग काटे
प्रकाशित मिति २९ असार २०७६, आईतवार १७:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । २४ वर्षीय अनवरुल हसन महिनौंपछि गोरखपुरको सिद्धार्थनगरस्थित घर आए । पत्नीसँग यौनसम्पर्क गर्न मागे । पत्नीले मानिन् । आवेगमा आएर पत्नीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिदिए । त्यतिले मात्र नपुगेर आफ्नै लिङ्ग काटे । २३ असारको विहान उत्तर प्रदेशको गोरखपुरको नेपाल नजिकैको सिद्धार्थनगर जिल्लामा यस्तो घटना भएको हो ।
एक वर्ष अघि २१ वर्षीया मेहनाजसँग विवाह गरेका उनी सुरतमा काम गर्थे । बिदामा घर आएको दुई दिनसम्म पनि पत्नीले यौन सम्पर्क गर्न नदिएपछि आक्रोशित भएर हत्या गरिदिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । घटनाको बखत दुवै जना घरमा एक्लै थिए । हत्या गरी लिङ्ग काटेपछि चिच्याहट सुनेर छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग हसनले पत्नीले यौनसम्पर्क गर्न नदिएपछि आवेगमा आएर हत्या गरेको बताएका छन् । युवकको गोरखपुरस्थित बाबा राघव दास मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मृतकका बाबुले युवकमाथि उजूरी दिएका छन् । घटनाले मानिस कामवासनाको रापले कतिसम्म हिंस्रक हुँदोरहेछ भन्ने देखाएको छ ।
राइजन इनर्जीः सोलार आयोजनामा १६ करोड ठगी, कुलमानकाे संलग्नता, कस कसले मिलेर खाए ?
काठमाडौं । नुवाकोटमा निर्माण गर्ने भनिएको २५ मेगावाट क्षमताको ग्रिडजडित सोलार फार्म आयोजनाको…
नाका, कान र घाँटीको क्यान्सरबाट कसरी बच्ने ?
काठमाडौं । नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरको चर्चा अन्य क्यान्सरको तुलनामा कम भएको सुन्न र समाचार पढ्न पाइन्छ । यी…
यातायात सञ्चालनमा रोक, यात्रुहरु मार्कामा
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारबाट विसं २०७४ चैत १८ मा जारी गरेको यातायात निर्देशिका खारेजीको माग…
मानव अधिकार आयोगले भनेअनुसार कानून बनाउन संविधानले दिँदैन : कानूनमन्त्री
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मानवअधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संविधानअनुसार नै ल्याएको दाबी गरेका…
काठमाडौं । पुरुषको तुलनामा महिलाको स्मरणशक्ति बढी हुन्छ । यो कुरा सन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । हालै अमेरिकाको…
सुन चाेर्ने नयाँ तरीका यस्ताे छ ? जानीराखाैं
विराटनगर । नेपाली समाजमा भनाइ नै छ ‘चोरका चार दाउ’ । यस्तै जुक्ति रचेर सुनको सिक्री चोर्न खोज्ने एक…